Ukudla okunempilo ukuze kwesisindo. kufanele kube kanjani?
Asho ukuthini labo kusukela izikrini TV ungibelesela ngokuthi yokudla okunempilo ngokuba kwesisindo ngaphezu kwanoma yimuphi ekudleni? Endaweni yokuqala kuziwa ekukhetheni imikhiqizo efanele futhi Izindlela sokulungiselela yabo, enquma Inani amandla, ukuphepha amavithamini, ukulandelela izakhi kanye nokunye. D.
Kuyini efanele lokudla? Kuyinto futhi ukusatshalaliswa elilingene ngokwezimboni ukudla usuku lonke. Njengoba odokotela esungulwe ngenxa yocwaningo, iningi labantu okhuluphele sidebeselele ibhulakufesi. Nokho, ezokwelapha ziye kungase kutholakale ukuthi ukuncipha umngane othembekile - kwasekuseni okumnandi. Kuyasiza ukusabalalisa kahle ukudla emini.
Ukudla okunomsoco - kungcono ubuye a ubuncane ethosiwe. Kufanele esikhundleni ukudla abilisiwe, isitshulu. Ideal - ukuthenga ngesitimu. Ngenxa yalokho ukwelashwa ukushisa ingxenye enkulu amavithamini namaminerali libhujiswa. A ingcindezi cooker ikuvumela ukuba ugcine cishe zonke izakhamzimba. Ukudla iphekwé ngamanzi, iqukethe fat kancane, ngakho izitsha engasindi kakhulu futhi okunama-kilojoule amancane. Miselela imayonnaise ku ukhilimu omuncu, usoso ashisayo - ku seasonings ezomile. Yidla imifino eziningi fresh.
Regulations zidinga ukuhluleka ukudla okunempilo imikhiqizo Semi-siphelile. Yiqiniso, ngenxa yokungabi nesikhathi esanele, yokufuna ravioli nokunye okunjalo, efana, kulingane. Nokho, lapho ucabangela esikhundleni eziningi kangakanani zemvelo, izithasiselo futhi flavorings esetshenziswa kubo, khona-ke kuba sobala ukuthi isikhathi ukonga kuyophumela umonakalo obuphawulekayo impilo yakho futhi sibalo. Nokho, uma uthanda amadombolo kanye entwasahlobo imiqulu, kungcono ukuba adle nabo kancane kaningi futhi ukukhiqizwa ekhaya kuphela.
Yini enye likhona welithi "nokudla okunempilo ukuze kwesisindo"? Udinga ukudla okuphekwe kuphela, ukudla. Okungukuthi, udinga ukupheka izinto eziningi ezincane ukuze ukudla azange abe ukuxoxa. Yiqiniso, kunzima kakhulu ukukwenza, kodwa lokhu okumelwe balwele ukuzifinyelela.
Ukudla okunempilo ukuze kwesisindo kudinga elilungile Inani elimaphakathi kilojoule nsuku zonke. Ukuze wenze lokhu, akudingeki ukuba babegcina ukubala, wena nje esingamakhilogremu (intuitively) umsoco ukudla washisa amandla ngosuku. Ukuze athobele lo mthetho, zama ukudla imikhiqizo enempilo nokulungile nengcosana ngezikhawu 3-4 amahora, ngaphandle ngokweqile umzimba ukudla ngethuntubezeke kakhulu ukuba kunzima ukucubungula ngokushesha. Isikhathi kudingeka okwengeziwe hhayi lokhu processing, maningi amathuba ukhuluphele. Ngakho-ke, zama ukudla zemifino salads, nama-dessert esikhundleni ophehliwe.
IsiQubulo odumile zonke dieticians - phuza amanzi amaningi. amanzi avamile ahlanzekile. Norm - amalitha hhayi ngaphansi kuka eyodwa nengxenye ngosuku. Uma unga, baphuze ngaphezulu. Phela, kubaluleke njengokugwema ketshezi ngobuningi, ukudla uketshezi (isobho, purees futhi t. D.). Ngenxa yalokho, ukudla okulula ukugaya, liyasiza esiswini futhi wonke isimiso sokugaya ukudla bungene.
Omunye umthetho, ogxile ukudla okunempilo elisetshenziselwa ukunciphisa umzimba, - ukudla ahlukene eyanele. Lokhu kusho ukuthi awukwazi mix carbohydrate amaprotheni ukudla. Inhlanzi, amaqanda, ushizi, inyama, okusanhlamvu kanye amazambane kudingeka babe imifino kuphela. Manje lesi simiso kulandelwa eziningi.
Isilimo esidliwayo esinamagatsha anamanzi impande: izakhiwo ewusizo
Bangaki ukuya amakati British abakhulelwe: isikhathi, izigaba kanye izici masonto onke
"Clock kaNcibijane" - isaladi. Ungadliwa loNyaka Omusha